10ka duuliye ee ugu mushaharka badan diyaaradaha adduunka | 2022 Wareega Maalka
Bogga ugu weyn 10 -ka Duuliye ee Diyaaradaha Diyaaradaha ugu Mushaharka Badan | 2022
Waxaad aad u xiisayn lahayd layaabnimada duuliyenimada. Sidaa darteed, "Haddii aad duuli karto, dakhligaagu wuu sarreeyaa" Giorgio. Warshadaha duulista ayaa ka faa'iideysta fursadaha shaqo ee ugu faa'iidada badan. Gunnooyinka ay duuliyeyaashu ku raaxaystaan ​​waxaa ka mid ah safarro raaxo leh, hudheelo kharashkoodu ku baxayo oo dhan, caymis caafimaad oo lacag la'aan ah, jadwalka dabacsan, iyo sida iska cad, mushaharro yaab leh. Arday cusub, Jane, waxay fursad u heshay inay wareysato duuliye, Giorgio Coleman, oo ka shaqeeyay mid ka mid ah 10-ka diyaaradood ee ugu mushaarka badan Maraykanka.
Maalintii wareysiga, Jane waxay timid hoteelka Hilton, Fiumicino. Waxay u socotaa hoolka shirarka si ay ugu wargeliso imaanshaheeda soo dhoweeyaha. Si la yaab leh, Giorgio ayaa durba ku sugaysay hoolka shirarka. Wakhti -ku -sheegga, dabcan, waa mid ka mid ah wanaagga duuliye kasta oo guulaysta.
Waxay gacanta u taagtay gacan-qaadis laakiin waxay xusuusisay hab-dhaqanka cusub ee adduunka sababtuna tahay masiibada Covid-19. Waxay si kooban isu soo bandhigtay waxayna bilowday cilmibaarista.
Kahor intaanan sheekada sii wadin, waxaa muhiim ah in la xuso in duuliyeyaashu ay ku raaxaystaan ​​gunnooyinka sida safarrada raaxada leh, hudheelada kharashkoodu ku baxayo oo dhan, caymis caafimaad oo lacag la'aan ah, jadwalka dabacsan, iyo sida iska cad, mushaharka cajiibka ah.
Hadda, ku noqo sheekada!
GUDBINTA SHIRKADA DUGSIGA
Giorgio wuxuu ku bilaabay sharraxaadda hababka lagu noqdo duuliye. Si aad u noqoto duuliye, aad u danayso barashada xisaabta, luqadaha, juqraafiga, fiisikiska, isgaarsiinta, iyo kimistariga.
Aqoonta xisaabeed ee wanaagsan waxay kuu saamaxaysaa inaad samayso xisaabinta aasaasiga ah taas oo ah shuruud aasaasi u ah dhammaan Duuliyeyaasha.
Intaa waxaa dheer, kuwaan iyo kuwa kaleba waa shuruudihii looga shaqayn lahaa duuliye ahaan si ay ula shaqeeyaan ugana kasbadaan mid ka mid ah diyaaradaha ugu mushaarka badan.
Luqadaha ayaa muhiim ah, gaar ahaan Ingiriisiga, luqadda rasmiga ah ee Ururka Duulista Rayidka ee Caalamiga ah, ICAO. ICAO waxay u baahan tahay ugu yaraan aqoonta Luqadda Ingiriisiga ee heerka afaraad, ama dhibcaha heerka 6.0 ee Imtixaanka Ingiriisiga oo ah Luuqad Shisheeye, TOEFL, ama Adeegga Imtixaanka Luqadda Ingiriisiga ee Caalamiga ah, IELTS.
Aqoonta guud ee juqraafiga ayaa iyaduna lama huraan ah maadaama dalalku si kala duwan uga taagan yihiin adduunka. Sidaa darteed, aqoonta dhererka waddamada, loolka, iyo masaafo ka fog dhulbaraha ayaa muhiim ah. Waa ku habboon tahay in la barto sida loo isticmaalo akhristaha khariidada si sax ah. Ogow xawaarahaaga dabaysha, cimilada, iyo xilliyada dalalka. Aqoonta sifooyinka Badaha, Badaha, iyo harooyinka waa lagama maarmaan.
Fiisigisku waa mid ka mid ah mawduucyada ugu muhiimsan ee duulista. Duuliye wanaagsan wuxuu fahmaa aerodynamics. Mawduuc aerodynamic la yaqaan sida xoogagga, awoodda, miisaanka, kor u qaadista, jiidista, iyo riixidda ayaa ka dhigaysa duulista mid xiiso leh.
Isgaarsiinta iyo wada shaqaynta ayaa sidoo kale loo baahan yahay, gaar ahaan duuliyayaasha ganacsiga. Xaqiiqdii, si aad ugu duusho diyaarad hal ama matoor badan leh, waa inaad si hufan ula xiriirtaa macallinkaaga duulista, shaqaalaha iyo kuwo kale oo badan.
Kimistari waa mid ka mid ah fasallada ugu muhimsan si loo noqdo duuliye. Marka laga reebo fahamka falcelinta cimilada, ogaanshaha kiimikooyinka ayaa ka caawin doonta duuliye inuu ogaado nooca urta uu ka dhex arko markabka.
Hoos waxaan ku liis garayn doonaa Duuliyeyaasha Diyaaradaha Diyaaradaha ee ugu mushaharka badan adduunka.
SIDEE AYAAN KU HELI KARAA SHAHAADAYNTA RASUULYADA AMA RUQSADDA?
Ruqsadaha ama shahaadooyinka duulimaadka ayaa loo baahan yahay ka hor inta aan la duulin. Sidaa darteed, mid hore u haystay Shatiga Duulimaadka Gaarka ah, PPL, wuxuu u baahan yahay inuu haysto Shatiga Duuliyaha Ganacsiga, CPL, ka hor inta uusan raacin rakaabka.
Waxaad u baahan tahay inaad barato xaaladaha saadaasha hawada, xaaladaha IMC ee diyaaradaha hal-matoor leh. Kahor intaadan gaarin shahaadada CPL, waa inaad noqotaa 18 sano ama ka weyn. Sidoo kale, waxaad u baahan doontaa inaad haysato caafimaad 1.
Intaa waxaa dheer, waa inaad leedahay aqoon aragtiyeed oo ku saabsan aasaaska duulimaadka. Qaado qiimeyn Habeen ah oo ah 50 saacadood wadarta waqtiga duulimaadka iyo 50 saacadood oo kale duuliye qeybaha taliska.
Marka tallaabooyinkaas la dhammaystiro, waxaa lagu siin doonaa ruqsad aad ku duuli karto shirkadaha diyaaradaha ee ganacsiga. Haddii aad rabto inaad la duusho duuliye-yaasha, waxaad u baahan doontaa inaad haysato Shatiga duuliye ee shaqaale badan.
Tan, waxaad ku ogaan doontaa inay wax badan qaadanayso si aad u noqoto mid ka mid ah Duuliyeyaasha Diyaaradaha Diyaaradaha ee ugu mushaarka badan.
WAA MAXAY SHAQAALAHA LOOGU TALAGALAY DUULIYADAHA CAALAMIGA AH? DUULIYADU MALAAYIIN MA DHASHAA?
Lacagaha iyo sicirka sarrifka ayaa door muhiim ah ka ciyaaraya marka ay doodaha sidan oo kale samaynayaan: duuliyeyaashu malaayiin ma mushahar bay ka dhigaan?
Tani waa xaqiiqda, duuliyeyaasha duulimaadyada caalamiga ah ayaa ah kuwa ugu mushaharka badan oo qaata celcelis ahaan mushahar dhan $ 115,950.
Mushaaraadka duuliyeyaasha way ku kala duwan yihiin dhammaan gobollada Mareykanka. Cunsurrada sida jinsiga, waxbarashada, nooca Boeing duuliye duuliyaha, iyo heerka khibradiisa ficil ahaan ayaa go'aamiya mushaharkiisa.
Guud ahaan, duuliyeyaashu waxay sameeyaan malaayiin.
Sidoo kale akhri: Top 10 Kulliyadood oo leh Qalinjabinta ugu Mushaharka badan Dunida | 2022
TOP 10 DIYAARADOODA UGU SAREEYA LAGU BIXIYAY DUULIYADA USA, 2022
1. Diyaaradda Alaska:
Maaddaama ay tahay mid ka mid ah duullimaadyada ugu da'da weyn Mareykanka, Alaska Airline waxay sumcad aan fiicnayn ku leedahay shaqaalaheeda.
Shirkadan duulista hawada oo 77 jir ah ayaa soo shaac baxday 1944kii.
Mushaaraadka duuliyeyaasha guud ee warshadan ayaa u dhexeysa $ 93,000 ilaa 190,000 sarkaalkii ugu horreeyay ee ka shaqaynayay shirkadda muddo sannad ah illaa 12 sano, siday u kala horreeyaan.
Kabtannada hadda dib u bilaabay, khidmaddu waa $ 226,000 waxayna kasbataa $ 266,000 12 sano oo adeeg ah.
Alaska Airline waxay leedahay mid ka mid ah duuliyeyaasha diyaaradaha ugu mushaarka badan adduunka.
Diyaaradan waxay shaqaynaysay ilaa 92 sano taas oo ah 1929. Duulimaadyadeeda hoostaga waxaa ka mid ah Virginia Atlanta, Endeavor air, iwm.
Sannadka ugu horreeya ee tababarka, sarkaalka ugu horreeya wuxuu qaataa qiyaastii $ 92,000. Sannadkeedii 12aad ee tababarka, wuxuu kasbadaa $ 232,000. Halka kabtanka uu qaato inta u dhaxaysa $ 325,000 ilaa $ 354,000.
Diyaaraddan ayaa sidoo kale leh mid ka mid ah duuliyeyaasha ugu mushaarka badan.
3. Diyaaradaha United:
Waxaa la aasaasay sanadka 1926, waxayna xarunteeda ku taal Chicago, Illinois.
Mushaharka sanadlaha ah ee duuliyeyaasha ka shaqeeya United wuxuu u dhexeeyaa $ 91,000 ilaa $ 240,000 oo ah saraakiisha ugu horreysa.
Kabtannada, mushaharka sannadlaha ah waa qiyaastii $ 323,000 illaa $ 352,000 taas oo ku xidhan sannadaha waayo -aragnimada ficil ahaan.
Diyaaradani waxay xarunteeda ku taal Fort Worth, Texas. Waxaa la aasaasay Abriil 15, 1926.
Maadaama ay tahay shirkad duulimaad oo waarta, waxay leedahay mid ka mid ah duuliyeyaasha diyaaradeed ee ugu mushaharka badan oo qaata mushahar u dhexeeya $ 90,000 ilaa $ 245,000. Waayeelka, mushaharka sannadlaha ah wuxuu u dhexeeyaa 314,000 ilaa 342,000. Wax kale arag Shaqooyinka ugu mushaharka badan Ameerika
Jetblue waxaa la aasaasay sannadkii 1998. Shirkadan duulista hawada ee 22 jirka ah waxay xarunteeda ku taal Long Island City, New York.
Waxay siisaa duuliyayaashii sarkaalka ugu horreeyay qiyaastii $ 89,000 sannadaha ugu horreeya ee adeegga. Muddo 12 sano gudahood ah shaqada duuliyuhu, wuxuu qaataa $ 180,000. Kabtannadu waa duuliyeyaasha diyaaradaha ugu mushaharka badan waxayna ka helaan $ 234,000 illaa $ 269,000.
6. Diyaaradda Koonfur Galbeed:
Shirkad la aasaasay bishii Maarj 15, 1967, khidmadda duuliyayaasha ayaa lagu qiimeeyay lambarka lixaad ee Maraykanka, 2022. Xarunteedu waxay ku taal Dallas, Texas.
Sarkaalka ugu horreeya wuxuu kasbadaa $ 84,000 illaa $ 191,000 sanadkii. Mushaaraadka Kabtannada ayaa u dhexeeya $ 241,000 illaa $ 274,000.
Sidoo kale akhri: Darawalada Baabuurta ugu Mushaharka Badan Caalamka | 10 Dalalka ugu fiican
7. Diyaaradaha Ruuxa:
Iyada oo ah shirkad caan ah oo la aasaasay 39 sano ka hor sannadka 1983, Southwest Airline waa mid ka mid ah diyaaradaha ugu da'da weyn ee ka shaqeeya Miramar, Florida.
Duuliyaasha ka shaqeeya shirkadan waxay kasbadaan $ 59,000 sanadka ugu horeeya waxayna u gudbaan $ 167,000. Sannad ka dib markii uu noqday kabtan, mushaharka ayaa ka kordhay 189,000 ilaa 252,000.
Kabtannadu waa duuliyayaasha diyaaradaha ugu mushaharka badan xagga Ruuxa.
8. Diyaaradaha Frontier:
Frontier Airlines waxaa la aasaasay bishii Febraayo 8, 1994. Shirkad duulimaad oo dhallinyaro ah oo kobcaysa, xarunteedu waxay ku taal Denver, Colorado.
Mushaharkeeda sanadlaha ah ee saraakiisha ugu horreysa waa $ 58,000 illaa $ 162,000. Kabtannada, mushaharka kabtanka waa $ 184,000 ilaa $ 1245,000.
9. Diyaaradda Sun Country Airline:
Xarunta shirkaddan waxay ku taal Minneapolis, Minnesota. Waxaa la aasaasay sanadkii 1982.
Waxay ka bixisaa duuliyeyaasha $ 52,000 ilaa $ 122,000. Kabtannada, mushaharku wuxuu u dhexeeyaa $ 116,000 illaa $ 189,000.
10. Hawaain Airline:
Xarunta dhexe waxay ku taal Honolulu, Hawaii. Waxaa la aasaasay sannadkii 1929 -kii.
Diyaaradani waa tii ugu dambaysay ee ugu saraysay 10 -ka shirkadood ee ugu sarreeya ee ugu mushaarka badan/duulimaadyada duuliyeyaasha.
Saraakiisha markii ugu horeysay waxay kasbadaan qiyaastii 201,000 ilaa 288,000. Kabtannada, mushaharku wuxuu u dhexeeyaa $ 300,000 illaa $ 327,000.
Jane way ku faraxday inay heshay fursadan. Waxay baratay habraacyada noqoshada duuliye diyaaradeed, mushaharka sannadlaha ah ee 10 -ka ugu sarreeya duuliyeyaasha diyaaradaha ugu mushaarka badan USA, waxayna xaqiiqdii saamayn weyn ku yeelatay.
Runtii, duuliyeyaashu waxay sameeyaan malaayiin haddii aad duuli karto, dakhligaaga ayaa sarreeya
Daabaca Macquulka ah
Shaqaalaha Bulsho ee ugu Mushaharka badan 2022| 10ka Xirfadood ee ugu Wanaagsan Shaqada Bulshada
NFL waa ciyaar caan ka ah dalka Mareykanka oo soo jiidata malaayiin daawadayaal ah sanad walba. Sida…
26 Talooyin si aad u ilaaliso Dukaameysiga Raashinka ee Miisaaniyadda sanadka 2022
Mid ka mid ah siyaabaha aad ku noqon karto mid caqli-gal dhaqaale ahaan waa adiga oo kharashyadaada ka dhigaya mid hooseeya oo aad awooddo.…